Unhu siyana Stainless Steel - China Richina
Unhu siyana Stainless Steel
Richina ari nyanzvi ose Stainless Steel Garden Tools, Asi vatengi vazhinji vanogona kufunga hworudzii Stainless simbi inoshandiswa izvi Garden Tools, Ndezvipi zvakasiyana pamusoro Stainless simbi?
Not Stainless simbi zvose zviri zvakafanana yepamusoro uye sezvamunoita. The zvakawanda nickel uye Chrome pangoro simbi chiwanikwa, kuoma uye hunogara zvakawanda zviri. Somugumisiro, zviri anodhura kuti muchina uye chiPolish. Stainless simbi flatware may yakaitwa kubva rimwe alloys siyana. The anowanzodanwa kushandiswa alloys vari 304, 410, 420 uye 430.
Kuwedzera simbi, kuti chiwanikwa 304 rine mukurumari 18% Chrome uye nyoro kubwinya 8% nickel. Izvi akapfuma musanganiswa Chrome uye nickel rinopa kunonyanyisa nengura uye ngura kudzivirira. 18/8 Stainless anoonekwa zvikuru kwazvo uye rinowanikwa wakaisvonaka Stainless simbi flatware may. MuEurope, imwe 18/10 akafanana rinoshandiswa, inova yakaenzana US mureza 18/8.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼The chiwanikwa 430 rine 18% Chrome uye hapana nickel. Kupa mari kusvika, 18/0 Stainless ane runoshamisa Kutarira uye vanonzwa 18% Chrome, uyewo yakasimba, yakakwirira chiPolish painoperera. Inopa wakanakisisa nemishonga ngura uye ngura. 18/0 Stainless parakaturikwa tichishandisa zvakanaka rinorema vezvokutengeserana kushandiswa asi haripi nokusingaperi kubwinya kwakaita 18/8.
410 Stainless simbi chiwanikwa ine 13% Chrome uye hapana nickel. 13/0 Stainless simbi inopa runako pane mwero mutengo asiwo ndiye muduku husingakwanisi ngura uye rusting. Zvakakodzera kana mutengo ndiro pamusoro nezvazvo.
Garden yedu Tools, kusanganisira Garden guru Kuchera Ezvemutauro kana Garden Small Hand Tools, wakaumbwa 420 chiwanikwa,
Izvi mukuru-kabhoni, 13% Chrome zvinhu Zvakanakisa wakanyatsokodzera chipande nokuchengetedza kunoguma unopinza okurwadzisa mucheto.